﻿ किन तीतो हुन्छ करेला ?
किन तीतो हुन्छ करेला ?
बुधबार ११, भदौ २०७६
तीते करेला वैज्ञानिक वर्गीकरण अनुसार फूलफुल्ने वनस्पतिको समूहमा कुकुरबिटासी परिवारमा पर्ने एक वनस्पति हो । स्वादमा तीते करेला खनिज पदार्थयुक्त तथा औषधीय गुणले भरपूर सब्जी हो । यो स्वास्थ्यका लागि आवश्यक चिज हो ।
करेलाको सेवनले मधुमेह, अस्थमा, रक्तचापजस्ता रोगमा फाइदा पुर्याउँछ । प्राकृतिक चिकित्सामा करेलाको रस वा पाउडर खुवाउने गरिन्छ । यसले क्यान्सर, सूजन, पाचनसम्बन्धी समस्या, महिनावारीको गडबडी, विषाणु र जीवाणुको संक्रमणमा पनि लाभ गर्छ । फल वा पातको रस पेटका जुका मार्न, जलेकोमा र फोडाफुन्सीमा लगाउन प्रयोग गरिन्छ ।
तितेकरेलाको रसले गर्भपतन गराउने र शुक्रकीटनिर्माण बाधित गर्ने हुनाले गर्भवती महिला र शुक्रवद्र्धन चाहने पुरुषले करेला सेवन नगर्न वा कम सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ । तीतोपन र विषाक्तता हटाउन यसलाई १० मिनटसम्म पानीमा उमाल्ने या नुनपानीमा भिजाउने गर्न सकिन्छ ।
सुरुमा तीतो लागे तापनि पछि तितेकरेला स्वादिलो लाग्न थाल्छ । पोषकौषधीय गुण र भिन्नै स्वादका कारणले बजारमा तितेकरेला उच्च मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।
करेलाको बिरुवा उभयलिङ्गी (भाले र पोथी फूल एउटै बिरुवामा तर अलगअलग ठाउँमा लाग्ने) हुन्छ । बिरुवाको जीवनकाल १००–१२० दिनको हुन्छ । पात पाणिवत् ५–९ खण्ड परेको हुन्छ । लहरा छिटो वृद्धि हुने र नङ्ग्राले थाक्रोमा चढ्ने हुन्छ । मोमोर्डिसिन नामक अल्कल्वइडको कारणले करेला तीतो हुन्छ ।
नझुक्किनुस्, यो शिरिषको फूल होइन (भिडियोसहित)
यी बुबा जसले आफ्नी १६ महिने छोरीको विवाह गरिदिए
मृतक शिशुसँग फोटोशुट !